INkantolo Ephakeme yaseVermont Izolalela Icala le-FOI mayelana neMibhalo kaProfesa Yezimboni Zokudla - I-US Right to Know
Posted on September 10, 2020 by UGary Ruskin
Ukukhishwa Ngokushesha: NgoLwesine, Septhemba 10, 2020
Ini: INkantolo Ephakeme yaseVermont izolalela izingxoxo zomlomo e-US Right to Know v. University of Vermont. Leli cala lifaka isicelo ngaphansi komthetho iVermont Public Records Act wokuxhumana nge-imeyili okubandakanya uDkt.Naomi Fukagawa, ongusolwazi osafufusa kwezokwelapha e-University of Vermont. I-USRTK inesifiso sokufunda kabanzi ngomsebenzi kaFukagawa njengomhleli oyinhloko we-Nutrition Reviews. Iphephabhuku lishicilelwa yi I-International Life Sciences Institute (ILSI), iqembu elixhaswe izimboni zokudla nezolimo.
Nini: NgoLwesibili, ngoSepthemba 15 ngo-2pm EDT. Ividiyo yezimpikiswano zomlomo izosakazwa bukhoma ku: https://www.youtube.com/channel/UCx5naSorUsDA-rgrF1_SGkw
Kungani: I-US Right to Know yenza uphenyo olubanzi ngezimboni zokudla nezolimo, imikhuba yabo yebhizinisi namaqembu angaphambili. Njengomphumela walolo phenyo, Umqondisi Ophethe wase-US we-Right to Know uGary Ruskin ubhale izifundo ezintathu zezifundo mayelana ne-ILSI emaphephabhukwini Ukudla okunempilo yomphakathi, Ukusatshalaliswa Komhlaba kanye Nezempilo futhi Impilo Yomphakathi Ebucayi. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ngenkathi i-ILSI ithi "ithuthukisa inhlalakahle yomphakathi wonkana," empeleni isebenza egameni lomkhakha wezokudla.
Background: USRTK ilungiselele a ishidi lamaqiniso nge-ILSI. Imifushane ecaleni i-US Right to Know v. University of Vermont yilezi kuyatholakala lapha.
Ukukhishwa Kwezindaba, Uphenyo lwethu